As wr wb qopheessitota qoophii nuhuraalhudaa gaaltnii keessaan jeenataal firdossi hata.u.waan baayyee isiinirraa barachaa jira rabbiin umuuri keessaan keessa barahaka haka,u.!!!.gaafiin qaba. gafiin kos kanuma yeero hunda issiniti deedebite isiin cinqa jirtudha. inis wa.ee nikaati).annif jarsii ko erga adda bane woga4 genyeera. kan issa irraa adda nabasees waiidhuum diini rabbiiti. salata rabbi hin egatu yeero hundaa ofii kotiile shekota nanno ille it fiden Gorsa.ture. torbaan 1 salaate sana boda hindhissa. abbaaf hadhaa issatifile kabbaja hinqabu. annalle hiriyaa issa hiriyaa ko biratii waan hintanee naan jedha. akka hadhaa manasati Nahin laaluu. kanuma hundaa obseen ture.watokko jijjirama ara argamu didee. naxiineesu male . anillee ama biyyaa Allan jira. takkaa essa jirti jedhe mati ko gafate hin beeku. hama yomitaan akkasiiti ta.a jedheen jawalla issa barbaadee dawalee. qabbenyaan siibira qabu maharikos singfadhu nahiikin jedheen. ishi matii keeargiin jedhe matinkos bellamaratii dhaqaani achin boda yo birri (Kuma dhibba tokkof shantama )nakeenite male hinku jedhe maatiko gaalchee. Birri kana hundaa keenu hindanda.u. issatillee debbii.u hin fedhu. rakko kanatu harkaa naqaba maalii maaliko. obssanin issin dhagefadha.
Saidaa jedham says:
Assaallamu aleekum waramatulha wabarkathu Kabajmatoota fi jalaamaatoot Qopeessitoota radiyoo nuuraal hudaa baayee namaati toltojabadha halumaa kan ittii fufaa raabii umrii isiin haa dheeresu inshallah allah
ustz umar Ali
afiiyaa iraan Dr Rashidn gaafi qabaa dubartti fedhii jarsaa ishii gubbu enaa walqunaman bodaan gubadhee jitti maaltu ?
shamshadiin amiin says:
saagantaan radio nuuralhudaa barnotaa gaarrii nuuf qoodaa jirtaanii galatoomaa waan gaarrii iraa barannee
walloo. biyyako says:
as wr wb kabajamtotaa fi jalamtotaa barsiftotaa nuralhudaa akkam jirtaan baga jirataan bakumaa jitanitii tollaa rabbii keessaa jiradhaa kanati ansudhaa gafin qaba lnshallaa gafi kiyyaaf debii hin argadhaa jedhee abdiin qabaa inshalaa. gafin tiyalee. wahee maa kotii lrayii jalqabaa. gurbaa toko jaladhee turee jalalaa yero dhertuu waliin turee oso akasiitii teynuu ani karaa biya alaa demuuf kaee gafuma ani demuf gee kanaa nigayaa nahidhtee sabodaa ani bira demee egaa bira demee. jiia 8 ti jiraa nigan duratii garu wan rabin hin jalanee lsawaliin dalagee walumaa galatii waniin karaa keessan dhufee rabiin lraa ararmaa barbadeetii. yoakamiin godhee rabii raa , ararma fedhaa. maltu nar. egamaa garu gurbaan kun. namale lee hadhaa manaa hin qaba. anile oso qabanyu lsaa beku jaladhee gurban halan qabeessa. wan teef salata rabiilee hamaa humnaa lsaa lnumaa craqataa anileen akasumaa alhamdulilahii gafikiyaf debi obsaan lsin egadhaa galtomaa
March 7, 0261 sa;aa 1:38 pm Update tahe
December 1, 2021 sa;aa 11:47 pm Update tahe